Football Khabar » ग्वार्डिओला र युभेन्टसबीच ४ वर्षका लागि ‘डिल फाइनल’ !
ग्वार्डिओला र युभेन्टसबीच ४ वर्षका लागि ‘डिल फाइनल’ !
इटालीका अधिकांश ठूला खेल मिडियाले ‘ब्रेकिङ न्युज’ दिएका छन्– ग्वार्डिओला युभेन्टससँग ४ वर्षे सम्झौता गर्न तयार !’
पछिल्ला केही घन्टा यो समाचार सरुवा बजापरमा ‘हट केक’ बनेको छ । खबरअनुसार इंग्लिस क्लब म्यानचेस्टर सिटीका स्पेनिस प्रशिक्षक पेप ग्वार्डिओला इंग्ल्यान्ड छाडेर इटाली जान तयार भएका छन् । अघिल्लो दिन राति इटालीमा उनले युभेन्टसका खेल निर्देशकसँग बैठक बसेर सरुवाबारे बैठक गरेका थिए ।
इटालीका मिडियाले युभेन्टसका निर्देशक फावियो प्राक्टिसी र ग्वार्डिओलाबीच मिलानस्थित एक होटलमा बैठक गरेको खबर छापेका छन् । सोक्रममा ग्वार्डिओला युभेन्टससँग आगामी चार सिजनका लागि सम्झैता गर्न तयार भएका छन् ।
इटालीका वरिष्ठ खेल पत्रकार फेडरिको जेनारेल्लीले ‘रेडियो स्पोर्टिभा’मा भनेका छन् कि, युभेन्टस र ग्वार्डिओलाबीच डिल फाइनल भइसकेको छ । उनले युभेन्टसका निर्देशक र ग्वार्डिओला बसेर बैठक गरेको होटलको तस्बिरसमेत सार्वजनिक गरेका छन् ।
उनले सामाजिक सन्जाल ट्वीटरमा लेखेका छन्– ‘यसलाई एक निर्णायक दिन मानिएको थियो । र, भयो पनि । पेप ग्वार्डिओला अब युभेन्टसका नयाँ प्रशिक्षक बन्दैछन् । ४ वर्षका लागि डिल पक्का भएको छ ।’
यता, स्पेनका मिडियाले पनि गत राति ग्वार्डिओला र युभेन्टसका निर्देशक प्राक्टिसी र ग्वार्डिओलाबीच बैठक गरेको खबर छापेका छन् । सिटी लगातार च्याम्पियन्स लिगमा असफल भएपछि उनी नयाँ चुनौतीका लागि इटालियन महारथि क्लबमा अनुबन्ध हुन तयार भएको बताइएको छ ।
यता, सिटी अहिले युरोपियन च्याम्पियन्स लिगमा प्रतिबन्ध नजिक छ । उसलाई एक सिजन सो प्रतियोगिता खेल्न नपाउने गरी प्रतिबन्ध लाग्ने सम्भावना प्रबल छ ।
हालसालै ग्वार्डिओलाले सिटीलाई घरेलु प्रतियोगितामा ह्याट्रिक उपाधि जिताएका थिए । तर, सिटी च्याम्पियन्स लिगमा भने अन्तिम आठबाटै आउट भएको थियो ।
यसै साता मात्रै युभेन्टसका प्रशिक्षक मासिमिलानो एलेग्रीले क्लब छाड्ने पक्का भएपछि युभेन्टस नयाँ प्रशिक्षकको खोजीमा थियो । सुरुबाटै युभेन्टसले ग्वार्डिओला भित्र्याउन चाहेको चर्चा चल्दै आए पनि ३ दिनअघि ग्वार्डिओलाले एक अन्तर्वार्तामा बोल्दै आफू सिटीमा खुसी रहेको भन्दै युभेन्टस जानेकुरा ठाडै नकारेका थिए ।
प्रकाशित मिति ८ जेष्ठ २०७६, बुधबार १०:५८